Google dia mandefa ny Android Developer Preview 3 avy amin'ny Google I / O | Androidsis
Ny andiany fahatelo amin'ny topy mason'ny developer Android N dia aseho izao ary azo alaina amin'ny fitaovana Nexus rehetra. Google koa dia nanolotra ny sasany amin'ireo zava-baovao amin'ity fahatelo teo aloha ity, vonona hampiasaina na iza na iza manana Nexus.
Google dia nanambara fanovana vitsivitsy amin'ny interface ho an'ny fifanakalozana eo amin'ireo fampiharana izay noraisina tsara nandritra ny lahateny fototra. Ny fiovana miavaka indrindra dia ireo fampiharana vao tsy ela akory izay manana farafahakeliny 7. Izany dia satria ny 99 isan-jaton'ny mpampiasa tsy niditra app izay mihoatra ny toerana fahafito.
Misy fomba maromaro hahazoana ny fananganana vaovao napetraka amin'ny Nexus 6, 6P, 5X, Pixel C ary fitaovana hafa tohanan'ny hafa. Navoaka ihany koa ireo fanavaozana ny OTA ho an'ireo izay ao amin'ny programa beta. Avy amin'ny menio dia tokony misy.
Ny fomba iray hafa dia ny fampidinana ny fananganana avy amin'ny pejin'ny developer Google ary ny isa dia manangana NPD35K. Tokony holazaina fa ity fametrahana ity dia azo apetraka amin'ny fitaovana na dia tsy misy iray amin'ireo kinova taloha aza.
Anisan'ny mampiavaka ny fahatelo mialoha ny bokotra "esory daholo" amin'ny fampiharana vao tsy ela akory izay izay eo an-tampon'ny faran'ny lisitra. Ny zava-baovao kely iray dia ny fidirana mivantana eo amin'ireo fampiharana roa vao haingana tamin'ny fanindriana haingana ny bokotra virtoaly.
Google no nilaza izany ity kinova ity dia tokony ho marin-toerana kokoa ary nandrisika ny mpamorona hametraka azy amin'ny telefaona findainy. Anisan'izany ny topi-maso ny Daydream VR sy ireo fiasa vaovao voalaza etsy ambony.
Fampidinana ireo rakitra OTA avy amin'ity rohy ity, ary ny sary rafitra avy amin'ity hafa ity. ny famoahana mialoha ny developer amin'ny kinova fahatelo izay manidy ny ampahany amin'ny zava-dehibe indrindra amin'ny keynote Google I / O 2016.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Android N Developer Preview 3 dia misy izao
Google dia manambara ny Daydream, sehatra virtoaly virtoaly izay lasa ampahany amin'ny Android N